KONRAD CREDIT BANK | trosa mampahazo aina anao
Ny hoe mpiara-miasa mpiara-miasa dia midika ny fanohanana ny mpanjifany amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny fiainany ary manolotra azy ireo ny kalitao avo indrindra. Midika izany fa miantoka valiny mazava sy haingana amin'ny fangatahana tsirairay. Midika izany hoe manana ekipa tena manam-pahaizana manokana momba ny trosam-bola, voaofana tsy tapaka. Ny fananana orinasa mpampindram-bola dia midika hoe manaiky ny fanaraha-maso hentitra kokoa. KONRAD CREDIT BANK nanatanteraka izany.
Ny KONRAD CREDIT BANK dia vita amin'ny fampindram-bola amin'ny alàlan'ny fanomezana fampindramam-bola arakaraka ny filan'ny mpanjifa sy ny teti-bolany, ary amin'ny alàlan'ny fampiofanana sy ny fanentanana ny olona manampahefana KONRAD CREDIT BANK mifandraika amin'ny fisorohana ny trosa tafahoatra sy ny loza mety hialana amin'ny famatsiam-bola. .
Eo anilanao mandritra ny 20 taona mahery. Tamin'ny fiafaran'ny nananganana ny KONRAD CREDIT BANK-GROUP dia noforonina tamin'ny taona 2008 ny KONRAD CREDIT BANK hanampiana ny fitaovana ilaina amin'ny tokatrano. Ny orinasa mpampindram-bola dia nohavaozina tamin'ny taona 2012 ary avy eo natokana ho an'ny privé tamin'ny taona 2013. Tamin'ny taona 2015 dia nakambana tao amin'ny vondrona Crédit Mutuel tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa izany, alohan'ny nahazoana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 2017.
Ny KONRAD CREDIT BANK dia manam-pahaizana amin'ny trosan'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao, izay manohana anao isan'andro isan'andro amin'ny tetikasanao tsirairay ary manolotra anao vahaolana ara-bola ilaina. Matihanina amin'ny serivisy ara-bola ho an'ny tena manokana, KONRAD CREDIT BANK dia mpitarika manerantany amin'ny tsenan'ny mpanjifa. Amin'ny fiasa lalandava hanohanana ny mpanjifa amin'ny tetik'asan'izy ireo, ireo mpanolotsaina manam-pahaizana momba ny trosa dia mihaino tsara ny filanao. Manolotra vahaolana ho anao izy ireo, any amin'ny sampana na amin'ny Internet, arakaraka ny fandoa isam-bolana izay nofidinao.
Ny KONRAD CREDIT BANK dia manohana anao isan'andro, satria zava-dehibe amin'ny zavatra ilainao izany. Arovy ny tenanao raha sendra maty na tsy ara-potoana ianao.
Te-hamatsy tetikasa ianao, hamerina ny tranonao, hanova ny fiaranao, mandehana maneran-tany ...? Miaraka amin'ny KONRAD CREDIT BANK Loan Personal, mindramo ny vola notadiavina ary farito ny famerenam-bola namboarina amin'ny volanao.
Misaotra anao amin'ny ekipa KONRAD CREDIT BANK. Misaotra anao amin'ny fahatsoram-po sy ny hafainganao. Nahazo ny findramam-bola 35 000 Euros tao amin'ny kaontiko banky aho (Agram banka) nefa tsy nisy olana. Amin'izany trosa izany dia afaka mamatsy vola tsara ny zavatra ataoko aho. Banky 5 kintana ianao. Hotahian'andriamanitra anie ianao. ”
Misaotra anao aho noho ny fanampiana sy ny fahatsorana nomenao amin'ny orinasako. Miaraka amin'ny serivisinao KONRAD CREDIT BANK INSURANCE, ny mpiasa sy ny mpiasanako dia milamina izao. Misaotra anao aho noho ny fanampiana haingana nomenao anay. ”